REPUBLICADAINIK | नेपाल, खनाल र गौतमको भूमिका शंकास्पद, कस्का मान्छे हुन् ? - REPUBLICADAINIK
नेपाल, खनाल र गौतमको भूमिका शंकास्पद, कस्का मान्छे हुन् ?
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का सचिवालयमा बहुमतमा देखिएका छन् ।
नेपाल, खनाल र गौतमले दाहाललाई पार्टी अध्यक्षभन्दा पनि गुटको नेता मानेर कहिले खुमलटार, कहिले भैँसेपाटी, कहिले धुम्बाराही, कहिले पेरिशडाँडामा भेलाहरू गर्दै आएका छन् । दाहाल र ओलीले गल्ती गरेका छन् भने पनि नेपाल, खनाल र गौतमले दुबैलाई दवाव दिएर एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्ने थियो । तर, उनीहरूले त्यस्तो कार्य गर्न सकिरहेका छैनन् ।
व्यक्तिगत इच्छा पूरा भयो भने नेपाल, खनाल र गौतमले दाहाललाई छाडेर अन्तिममा ओलीलाई नै साथ दिनेछन् । अहिले दाहालका मान्छे जस्तो देखिए पनि उनीहरू पूर्वएमाले छाड्ने छैनन् ।
Published : Saturday, 2020 November 7, 9:39 am